Daawo Video: Sheekh Sacuudiyaan ah oo sheegidda Kalimad Xaq ah Xabsi ku mutaystay!
5 Askari Jabuutiyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Hiiraan.
Video+Warbixin: Muxuu Trump udiiday in Mareykanku dagaal lagalo Iiraan si loo difaaco Shidaalka Sacuudiga?.
Xaaf oo ka hadlay Shirkii lagusoo gaba gabeeyay magaalada Dhuusamareeb.
Dhageyso: Xubinta dhaq dhaqaaqa ganacsiga iyo Sicirka Suuqa.
Wednesday September 19, 2018 - 07:15:41 in Wararka by Super Admin
Ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa 24-kii saacadood ee lasoo dhaafay siyaaba kala duwan dilal uga geystay degmooyinka gobolka Banaadir taasi oo muujinaysa in ciidamadu sare uqaadeen tacadiyada ay ugeysanayaan shacabka.
Darawal kaxaynayay Moota Bajaaj ayaa kamid ahaa dadka ay ciidamadu toogashada ku dileen sidoo kale waxaa jiray dhac iyo boob ay ka geysteen xaafado katirsan degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan.
Dhacdada ugu naxdinta badan waxay aheyd toogasho ay ukala kaceen gabar yar oo ardayad ah xilli ay kasoo rawaxaysay xarunteeda waxbarasho.
Baraha bulshada ayaa lagu faafiyay sawirrada gabadha Ardayadda ah oo ay toogashada ugeysteen ciidamada xukuumadda Xasan Cali Kheyre.
Allaha u Naxariisto Deeqa Daahir Cali waa Ardayad dhiganaysay Schoolka Hooyga Xamar Stand 1, dhalatayna sanadka markuu Ahaa 2009 da'deeduna tahay 9 jir, Shalay Iyadoo kasoo rawaxday iskuulkan kunasii jeedday hooygii ay katimi kuna labisanYunifoomka iskuulka Sidatana Agabkeedii waxbarasho oo Saaran gaadhigi Matatuga Ahaa ee hooyga xamar ayay ciidamo katirsan dowladda toogteen halkaas oo ay ku dhimatay.
Ehelka gabadha Ardayada ah ayaa sheegay in falkan naxdinta leh ee lagula kacay deeqa Daahir aysan jirin cid katirsan dowladda oo kala hadashay.
Tacadiyada ay lakulmaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ah kuwa xad dhaaf noqday waxaana dilalka iyo dhaca uga imaanaya ciidamada dowladda usii dheer, howlgallo raaf ah oo maleeshiyaadka Alpha Group iyo kuwa Bangarafaata la yaqaan ugeystaan xilliyada habeenkii ah.
Dowladda Burundi oo qiratay in 12 Askari looga dilay Weerarkii Al Shabaab ee duleedka Balcad.
Al Shabaab oo Muqdisho ku dishay Sarkaal katirsanaa ciidamada Bangaraafta.
Dhageyso: Ciidamada AMISOM oo dad shacab ah ka raafay deegaanka Gololeey.
Sawirro: Al Qaacidada Jaziiradda oo Maxaabiis kasoo fakisay Xabsiyada Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Qaraxyo gaadiid looga gubay ciidamada AMISOM oo ka dhacay duleedka degmada Balcad.
Dhimashada Ciidamada Burundi ee Weerarkii duleedka Balcad oo 14 askari gaartay.
Xasan Cali Kheyre oo halis ku galay magaalada Marka kadib markii uu weerar lakulmay.
Diyaarado Drone ah oo lagu duqeeyay Keydadka Shidaalka dowladda Sacuudiga.
Sawirro: Odayaashii Xildhibaannada kasoo Xulay Maamullada Galmudug iyo Hirshabeelle oo degmada Buq Aqable lagusoo Bandhigay.
03/08/2019 - 09:55:00
24/07/2019 - 09:46:40